नकारात्मक र सकारात्मक भावना कसरी पैदा हुन्छ ? « Nepal Break
नकारात्मक र सकारात्मक भावना कसरी पैदा हुन्छ ?
मान्छेमा स्वभावत: सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरू जागृत हुने गर्छ । अर्थात् सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरूको सन्तुलन मिलाएर नै मानिसको सृष्टि हुने गर्छ ।
जसरी हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ, त्यस्तै मानवीय भावनाहरूको पनि दुई पाटा हुन्छन्, सकारात्मक र नकारात्मक। सकारात्मक भावनाहरू जस्तै नकारात्मक भावनाहरू पनि जीवनको अत्यावश्यक अंश हुन् । वास्तवमा यो केवल नकारात्मक भावनाहरू हो जसले हामीलाई सकारात्मक भावनाहरूको महत्त्व बुझ्न मद्दत गर्छ।
सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरू के हुन् ?
ती भावनाहरू जसले हामीलाई सामान्य रूपमा राम्रो बनाउँछ त्यसलाई हामी सकारात्मक भावना भन्ने गर्छौं । यी भावनाहरू हाम्रो वरिपरि रमाइलो वातावरण वा अनौंठो परिस्थितिमा हाम्रो आन्तरिक अन्तर्क्रियाको कारण उत्पन्न हुन्छ । सामान्यतया सकारात्मक भावनाहरू अन्तर्गत् प्रेम, आनन्द, सन्तुष्टि, चासो, खुसी, शान्ति, घमण्ड, अनुकम्पा, आशा आदि पर्छन् ।
अर्कोतर्फ, नकारात्मक भावनाहरू ती हुन् जसले हामीलाई प्रायः राम्रो महसुस गराउँदैनन् । नकारात्मक भावनालाई अप्रिय वा चोट पुग्ने भावनाहरूको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। साथै, यदि कुनै भावनाले तपाईंलाई हतोत्साहित र निराश गर्छ भने यो एक नकारात्मक भावना हो । सामान्यतया नकारात्मक भावनाका उदाहरणहरूमा स् डर, क्रोध, घृणा, उदासिनता, क्रोध, पश्चाताप, लाज, एकांकीपन, जलन आदि हुन् ।
हामीलाई सकारात्मक भावनाहरू जत्तिकै नकारात्मक भावनाहरू किन चाहिन्छ ?
यदि हाम्रा भावनाहरूको रिमोट कन्ट्रोल हाम्रो हातमा दिइयो भने हामीमध्ये धेरैजसो सकारात्मक भावनाहरू महसुस गर्न चाहन्छौं। किन रु किनभने सकारात्मक भावनाहरू रमाइला हुन्छन् ।
नराम्रो भावनाहरू छनौट गर्न मन पराउने कोही हुँदैन। तर हाम्रा दुवै भावनाहरू हाम्रो पूर्ण विकासका लागि आवश्यक छन् । प्रकृतिले यो कुरा हामीले भन्दा राम्ररी जान्दछ, त्यसैले हामीलाई भावनाहरूको रिमोट कन्ट्रोल कहिल्यै दिइएन होला ।
अवश्य पनि, नकारात्मक भावनाहरू अनुभव गर्न रमाईला हुँदैनन् । तर नकारात्मक भावनाहरू स्वस्थ जीवनको लागि वास्तवमै आवश्यक हुन्छन् । त्यहाँ यस्तो हुनु दुई ठूला कारणहरू छन्।
१स् यो नकारात्मक भावना हो जसले हामीलाई सकारात्मक भावनाहरू के हो भनेर बताउँछ। उनीहरूको महत्त्व के हो सोच्न बाध्य बनाउँछ । यदि कुनै नकारात्मक भावनाहरू छैनन् भने सकारात्मक भावनाहरू कसरी राम्रा देखिन्छन् रु अर्को महत्त्वपूर्ण कारण यो हो कि नकारात्मक भावनाहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनशैलीमा समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्छ । जसले हाम्रो बाँच्ने सम्भावनाहरूलाई बढाउँछ।
उदाहरणका लागि, रिसले हामीलाई समस्याहरूसित लड्न उत्प्रेरित गर्छ। दुःखले हामीलाई उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्छ । जो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन् वा जसलाई हामी प्रेम गर्छौं उसलाई सहयोग गर्न सिकाउँछ । डरले हामीलाई खतराहरूबाट जोगाउँछ र सुरक्षित रहनका नयाँ तरिकाहरू आविष्कार गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ।
सोच्नुहोस्, कुनै डर बिना, तपाईं आज यहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईं डराउनु भएन भने तपाईं अनावश्यक खतराहरूसँग खेल्नुहुनेछ, जसले तपाईंलाई केवल हानि गर्छ। भन्नुपर्दा नकारात्मक भावनाहरू हामीलाई अप्रिय लाग्न सक्छ तर हाम्रो जीवनमा तिनीहरूको महत्त्वलाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन ।
त किन नकारात्मक भावनाहरूलाई मात्र दोष ?
मानिसहरूले प्रायः नकारात्मक भावनाहरूलाई तनावको साथमा जोडेर हेर्ने गर्छ । हामीलाई डर छ, क्रोध, घृणा, उदासी, क्रोध, एकांकीपन, जलन आदिबाट हामी अन्ततः चिन्तित र तनावग्रस्त छौं भनेर हामीलाई सिकाइएको छ।
यो सत्य हो कि एक के कुनै व्यक्ति नकारात्मक स्थितिमा मात्र तनाव महसुस गर्नेछ रु होइन, यदि तपाईं तनावलाई नकारात्मक भावना वा अवस्थाको प्रतिक्रिया मान्नुहुन्छ भने पनि यो वास्तवमा व्यक्तिहरूका लागि तटस्थ हो। हामी प्रायः सकारात्मक अवस्थामा पनि तनावको अनुभव गर्छौं जुन एक सामान्य चीज हो।
यदि राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईंले धेरै अनुभवहरू पाउनुहुनेछ, जसले प्रायः सकारात्मक भावनाहरू प्रस्तुत गर्छन् । हाम्रो जीवन सधैं तनावले भरिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं विवाह गर्न लाग्नुभएको छ, जुन खुसीको कुरा हो। खुसी एक सकारात्मक भावना हो । तर तपाईं भविष्यको बारेमा तनावग्रस्त हुनुहुन्छ।
तपाईं परिवारको साथ अनौंठो ठाउँमा छुट्टीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईं राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंको भित्र तनाव भरिएको हुन सक्छ ।
तपाईंले आफ्नो सपनाको काम पाउनु भएको छ, जसले धेरै खुसी निम्त्याउन सक्छ । तर उसले जिम्मेवारी पाएपछि पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने दबाबले तनाव दिन्छ। माथि उल्लेखित सबै परिस्थितिहरूमा तनाव महसुस गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । यदि तपाईंले कतै पढ्नु भएको हुन सक्छ कि हामी सधैं सकारात्मक हुनै पर्छ ।
किनकि यसले जीवनलाई तनावमुक्त बनाउँछ, तब यो ठीक हुँदैन । जीवन केवल तब राम्रोसँग जान्छ जब त्यहाँ यसमा सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरु बीच एक सही सन्तुलन मिल्छ ।